महिलाहरू आत्म निर्भर हुनुपर्छ : बन्जाडे - Goraksha Online
महिलाहरू आत्म निर्भर हुनुपर्छ : बन्जाडे
उनले शृङ्गारका सामग्रीहरू साविक राप्ती अञ्चलका दाङ, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम र सल्यान जिल्लामा १८ वटा डिलरका सामग्रीहरू पु¥याउने गदै आएकी छिन् । उनले ६ जना महिला तथा २ जना पुरुषलाई रोजगार दिँदै आएकी छन् । आत्मविश्वास र लगनशीलता भएमा जुनसुकै काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सफल व्यवसायी बन्न सफल राधा बञ्जाडेसँग गोरक्षकर्मी अमरराज आचार्यले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
 गोरक्षको सातावार्तामा स्वागत छ ?
 धन्यावाद ! तपाईं अनि गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई, जसले मलाई आप्mनो व्यवसाय र समग्र महिला व्यवसायीको बारेमा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा ।
 फेरि पनि धन्यवाद छ, मेरा व्यक्तिगतसँगै व्यावसायिक कुरा पस्कने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई र गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकलाई धेरै–धेरै धन्यावाद दिन चाहन्छु । जुनसुकै स्थानमा काम गर्दा पनि आप्mनो लगनशीलता, मिहिनेत र इमानदारीपन हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा सफल बन्न सकिन्छ । महिलाहरू घरभित्र मात्रै सीमित नभई आत्मनिर्भर बन्नका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
चुनढुङ्गाले कोरेको क, ख …
‘चाडपर्वमा उपभोक्ताहरुलाई सहज ढंगले वस्तु उपलव्ध गराउ’